Lego Star Wars The Last Jedi ပွဲကိုဟောင်ကောင်တွင်ကျင်းပ
18 / 11 / 2017 17 / 11 / 2017 ဂရေဟမ် 1914 Views စာ0မှတ်ချက် 75179 Kylo Ren ရဲ့ TIE တိုက်လေယာဉ်, တင်ပြ, ဟောင်ကောင်, Kylo Ren, Lego, Lego Star Wars, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi
အံ့သြစရာ Lego Star Wars ဟောင်ကောင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်ခင်းကျင်းပြသခြင်းသည် The Last Jedi နှင့်ပွဲတော်ရာသီကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
Fantha လမ်းကြောင်းaကနေပုံရိပ်တွေတစ်ခုလုံးအိမ်ရှင် shared ခဲ့သည် Lego Star Wars ဟောင်ကောင်ရှိ APM Mall Kwun Tong တွင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းသည်ပန်ကာတိုင်းလိုချင်သည်ကိုမိမိတို့စျေး ၀ ယ်ရာသို့ရောက်သည်။ အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမြင့်မားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် 75159 Kylo Ren ရဲ့ TIE တိုက်လေယာဉ်၏အုတ် built မော်ဒယ်များကဝိုင်းရံ Star Wars ဇာတ်ကောင်။
ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်မှဇာတ်ကောင်များ၏အစစ်အမှန်ပုံတူပွားများသည် Stormtrooper အမျိုးအစားအသစ်အပါအဝင် ion display ဖြစ်သည်။ Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် display ကိုအပေါ်အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောပစ္စည်းကိုတစ် ဦး ကြီးများ Lego Star Wars ခရစ္စမတ်သစ်ပင် Star Wars မှုတ်သွင်းအရောင်အစီအစဉ်နှင့် Lego BB-9E သည် Santa Hat ဦး ထုပ်တွင်ထိပ်ဆုံးတွင်ထိုင်သည်။
တစ် ဦး က display ကိုအမှုမျိုးစုံမိတ္တူပြသထားတယ် Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi Lego အစုံတစ်ခုလုံးကိုအတန်ငယ်ပြသသည်, Crait ၏တိုက်ပွဲသရုပ်ဖော်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည် AT-M6 Walker များ ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။
ပိုမိုသောပုံများအတွက်မူရင်းအစီရင်ခံစာကိုကြည့်ပါ Fantha လမ်းကြောင်း.
Star Warsနောက်ဆုံး Jedi ကိုယူကေတွင်ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နှင့်ယူအက်စ်တွင်ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည် The Lego လာမည့်ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးအစုံဖြစ်ကြသည် ယခုရရှိနိုင်.
← Lego Star Wars ယနေ့ Toys R Us တွင် BB-8 တည်ဆောက်ခြင်းပွဲ
Lego BrickHeadz DC Justice League ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် →